Daawo: Macalin Dilib Ninkii Isku Maray Al-Shabaab Iyo Daacish Oo Bixiy...
Daawo: Macalin Dilib ninkii isku maray Al-Shabaab iyo Daacish oo bixiy…
Muqdisho (Wararka Maanta)- Barnaamijka Gungaar oo warbaahinta dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigto xogta ay bixiyaan xubnaha nolosha lagu qabto ama isaga baxa kooxaha ka dagaalama dalka ee Al-Shabaab iyo Daacish ayaa caawa lagu soo bandhigay nin ku xeel-dheer sameynta document-yada oo lasoo shaqeeyey Shabaab iyo Daacish labadaba.
Ninkaan waxaa lagu magacaabaa Macalin Saciid Cabdulle Dilib, waxaana lagu sheegay warbixintiisa inuu iskiisii isku soo dhiibay oo uu maray nidaamka ay dowladdu u dejisay dadka isaga soo baxa kooxaha xagjirka ah.
Ninkaan oo ku dhashay degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku taqasusay culuumta Network Engineering, sanadkii 2008-dii ayuu Al-Shabaab uga biiray magaalada Muqdisho.
Hoggaanka Al-Shabaab oo xilligaas ku qancay aqoonta uu u leeyahay luuqadaha Carabiga iyo English-ka ayaa Macalin Saciid tashkiiliyey inuu la shaqeeyo kooxda, waxuuna ka caawi jiray dhanka warbaahinta iyo sameynta barnaamijyada.
Wararka Maanta : Deg Deg: Xogta Kulankii RW Rooble & Siyaasiinta Waqooyi, Loolanka Gedo iyo...
Puntland oo sheegtay in ay kooxda Daacish ka saartay farriisin ay ku…
Turkey ‘oo fashilisay weeraro jilbaha loogu dhigi lahaa’ – Caasimada O…